Shiinaha Elastic band-saareyaasha, Hadalka sheegastikada kooxda laastikada ah - Angel Garment Accessories Co., Ltd.
Hoyga >Shabakadda > Xarkaha laastikada
Kalluunka xariirta xariirta
Suunka laastikada xariirta kalluumeysiga, oo sidoo kale loo yaqaan suunka mesh moolka iyo suunka laastikada ilaaliya, ayaa laga sameeyay Polyester iyo teknolojiyaddii weelka dharka fidsan, taasoo keentay dheeh ka hor geedi socodka tolidda.
Suunka caaga ah - Polyester suunka laastiktikalka badan, oo loo maro tikniyoolajiyaddii Polyester iyo Rubber Flex, oo hogaaminaya dheeh ka hor intaan la tollayn nidaamka. kuma jiraan waxyaabo waxyeelo u leh jirka.Waxay ku habboon tahay ilaalinta dhexda dharka militariga.
Edging band laastik ah
band laastikada gees waxaa laga sameeyey naylon ama naylon loogu talagalay dunta iyo weft, iyo spandex xariir sida waafaqsan qawaaniinta qaarkood ee isku dhafan.Bag laastikada ayaa isku laabaya bandhiga laastikada, waxaa jira xariijin isku xiran bartamaha webbuga, qaabku waa dabacsan yahay oo jilics......
Dharka laastikada ka samaysan yahay ayaa ka samaysan suuf ama xarig kiimiko ah oo lagu xidho suufka iyo weft, iyo koox silig caag ah (silig latex ah ama silig spandex ah) sida uu qabo sharci gaar ah oo is dhex galay. , xargaha midabka iyo geeska bilaha, maqaarka oo jilicsan oo jilicsan, alaabta ceyr......
Kooxda xargaha ee aan sibiibix ahayn
Qaybta laastikada ah ee aan sibiibix ahayn, oo sidoo kale loo yaqaan silikoon laastik ah, ayaa lagu tolay dunta xargaha iyo habka dahaadhka weft, oo la mid ah kooxda laastikada caadiga ah, laakiin habka daabacaadda silikooniga ah ayaa lagu daray hawsha. Badanaa waxaa loo isticmaalaa dharka isboortig......
Twill band laastik ah
Kooxda Twill laastikku waxay ka samaysan tahay cudbi ama faybar kiimiko ah sida dunta iyo weft, koox silig caag ah (silig casaan ah ama silig spandex ah) ayaa la isku xidhayaa iyadoo la raacayo qawaaniinta qaarkood.Waxay si gaar ah ugu habboon tahay nigiska, surwaalka, dharka ilmaha, funaanadaha, dh......